Isbarbardhigga faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka dhowr hab oo wax soo saarka waaweyn ee alaabta ceeriin caag ah Wax taaj oo kale duritaanka Mabda'a ah ee wax taaj oo kale duray waa in lagu daro wax granular ama budada ah galay hopper ee mashiinka duritaanka. Maaddada waa la kululeeyaa oo la dhalaaliyaa oo noqdaa mid firfircoon. Unde ...
Marka hore, waad ku mahadsantahay daryeelkaaga muddada dheer iyo taageerada aad siisay Erbo Technology! Horumarka bulshada ayaa sii xoogeysanaya, horumar walbana wuxuu suuqa ku keenayaa isbadal cusub oo cusub. Maaddaama Jarmalku soo jeedinayo in la sii wado sii xoojinta kacaankii afaraad ee warshadaha (Warshadaha 4.0) ee uu hoggaamiyo int ...
Dayactirka Maalintii Iyo Dayactirka Mashiinka Mindiga Afuufa
1. Nidaamka wax-ku-beddelidda Qalabka 'gear' wuxuu u baahan yahay inuu saliidda si joogto ah u beddelo. Xullo 150 (ama 220) saliid marsho warshad cadaadis daran oo dhexdhexaad ah. Saliida beddel 500 saacadood ka dib isticmaalidda mishiinka cusub, ka dibna saliidda beddelo 3000 saacadood oo kasta. Markuu mishiinku shaqada joojiyo oo jaangooyuhu wali kujiro ...
Hordhaca geedi socodka 3/4 ee alaabada dharbaaxo leh ayaa lagu soo saaray isugeyn dharbaaxo. Nidaamka soo-saarista ayaa ah in lagu qasbo maaddada iyada oo loo marayo dalool ama ay u dhinto wax soo saar. Nidaamka wax-u-qabashada dharbaaxo ee extrusion wuxuu ka kooban yahay 5 tallaabo: 1. preform caag ah (dheecaanka tubbada balaastiga ah ee godan). ...